Nandritra ny asa fanompoany manontolo i Jesoa dia nanome didy. Ary nampianatra Izy hoe: “Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko.” (Jaona 14:15; jereo koa ny andininy 21, 23). Nilaza Izy fa ny fitandremana ny Didiny dia mitaky amin’ireo mpanara-dia Azy ny mba hamoizan’izy ireo ilay nantsoiny hoe “izay zavatra heverin’ny olona ho ambony” (Lioka 16:15) sy ireo “fanaon’ny olona” (Marka 7:8; jereo ihany koa ny andininy 13). Nampitandrina ihany koa Izy hoe: “Raha naman’izao tontolo izao ianareo dia ho tia ny azy izao tontolo izao; fa satria tsy naman’izao tontolo izao ianareo, fa Izaho efa nifidy anareo tamin’izao tontolo izao, dia halan’izao tontolo izao ianareo” (Jaona 15:19). Araka ny nolazain’i Petera Apôstôly taty aoriana, ireo mpanara-